Oke mmiri ozuzo: ihe ọ bụ, otu esi eme ya na ihe egwu | Netwọk Mgbasa Ozi
Have nụtụla echiche nke akọrọ oké mmiri ozuzo. Ọ na - eme mgbe mmiri ozuzo na - eme ma ọ bụ enweghị mmiri ozuzo. Ọ nwere ike ịdị ka ihe na-emegiderịta onwe ya na usoro nke inwe égbè eluigwe na-enweghị ọdịda, ọ bụ ezie na ọ na-eme ọtụtụ oge. N'akụkụ nke ọdịda anyanwụ United States ọ na-eme na oke oge, ọkachasị n'oge opupu ihe ubi na mmalite oge ọkọchị.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara oke mmiri ozuzo, njirimara ya na ihe egwu ya.
1 Gini bu oke mmiri ozuzo
3 Akọrọ oké ifufe nwere
Gini bu oke mmiri ozuzo
Mgbe anyị na-ekwu maka oke mmiri ozuzo, anyị na-ezo aka n'ụdị ikuku ọkụ eletrik nke nwere ntakịrị ma ọ bụ enweghị mmiri ozuzo. A na-ahụkarị ya site na mbara igwe na-enwu ọkụ ugboro ugboro ma nke ahụ anaghị eweta mmiri ozuzo. N'ebe ọdịda anyanwụ United States ọ na-emekarị na oge opupu ihe ubi na mmalite oge ọkọchị. Ọ bụ na mpaghara ndị a ebe ndepụta ọkụ nwere ike ịdị oke oke na iru mmiri dị ala. A maara ya dị ka oke mmiri ozuzo n'ihi na ọ na-eme mgbe ọnọdụ okpomọkụ na okpomọkụ na-ezukọ n'okpuru mkpuchi igwe ojii. Akụkụ nke igwe ojii a maara dịka mkpuchi ikuku.
A ghaghi iburu n'uche na mmiri na-ezo n'ezie mana o nyere ya okpomoku, mmiri ozuzo, ma mmiri ozuzo ma o bu nke ozo, apughi iru ala ebe ha puru dika ha na-adaru ala. Anyị ahụworị na isiokwu ndị ọzọ na nke a ụdị mmiri ozuzo mara aha Virga. N'ihi nke a, ọ na-ezo mmiri mana ọ nweghị ekele maka na ọ na-atupu mmiri tupu ya ada n'elu.
Ka anyị lee ihe bụ isi kpatara oke ifufe a. Ihe kpatara otu ụdị ifufe ndị a bụ n'ihi ọkụ na-agba n'oké ọhịa. Nnukwu oke ọkụ na-eme ka mmụba nke okpomọkụ na mbelata iru mmiri nke gburugburu ebe obibi. Ke ini emịnen̄mịnen̄ asiahade nsat aran ke isọn̄, ikan̄ esitịbe. Rayszarị a na-emetụtakarị ọnwa oge okpomọkụ. N’agbanyeghi na mmiri adighi ezo ma olile-anya na ala, oke ikuku nwere otutu ihe ojo. A na-egbu àmụmà nke na-eme n'ọnọdụ mmiri ozuzo dị ka àmụmà akọrọ. Ọ bụ n'ihi ụzarị ọkụ ndị a nke na ọ nwere ike ịdaba mmanụ ọkụ wee mee ka ọkụ dị ọkụ.
Ahịhịa na ahịhịa na-adịkarị nkụ n'oge nke afọ a ma na-ere ọkụ ngwa ngwa. Ọbụna mgbe mmiri ozuzo nwere ike iru ala, iru mmiri dị oke ala na enweghị mmetụta ọ bụla na ọkụ. Na mgbakwunye, ebili mmiri ndị a nwere ike ime ifufe dị ike. akpọ Microbursts nke nwere ike imetụta ọkụ na-eme ka o sie ike ịkwụsị.
Akọrọ oké ifufe nwere
Ka anyị lee ihe ike ifufe na-efe. Microbursts ndị a kpọtụrụ aha n’elu bụ usoro ihu igwe nke jikọtara na ụdị ajọ ifufe ndị a. Mgbe mmiri ozuzo na-amịkọrọ ka ụmụ irighiri mmiri na-eru nso na ala, ala na-ajụtụ oyi. Mgbe ụfọdụ, ala na-ama oké oyi na obere oge. Anyị maara na ikuku oyi dị arọ ma na-agbada ngwa ngwa na ala. Mgbapụ a nke ikuku na ọkwa ala nwere ike ịmepụta ikuku siri ike. Obere ma ọ bụ enweghị mmiri ozuzo nke na-ewepụta oke mmiri ozuzo na obere iru mmiri na-eme ka ọnọdụ maka Microbursts ma ọ bụrụ na ha nwere ezigbo.
Ifufe nke ikuku gburugburu a na-eme nwere ike ibuli ọtụtụ ájá na irighiri ihe ndị ọzọ, ọkachasị na mpaghara kachasị akpọnwụ. Ihe a niile na - ebute oke ikuku ikuku nke nwere ike ibute nsogbu ole na ole. A maara oké ifufe ndị a dị ka haboobs na-erukwa ọtụtụ mgbe na steeti ọdịda anyanwụ. Megide uzu ikuku a enwere otutu ogbugba ndu. Okwesiri iburu n'uche na obu oke ifufe uzuzu ndi a ka i zutere, inwere ike inwu site na iku ume.
Ihe kachasị dị mma bụ na ụdị ebili mmiri ndị a nwere ike ibu amụma nke ọma tupu oge eruo. Ọ bụkwa na ọnọdụ ọzụzụ pụtara ìhè. Enwere ọtụtụ ebe na-adịghị ike na ndị bi na ya nwere ike ịdọ aka na ntị banyere mmalite nke oke ikuku mmiri. A na-akpọ ndị na-amụ gbasara ihu igwe dakwasịrị IMET a na-azụ ha ịchọ mmanụ ọkụ na-enyere aka ịgbasa ọkụ ọgbụgba. A zụrụ ndị a na-amụ gbasara ihu igwe na nkenke ihu igwe. N'ụzọ dị otú a, ha maara omume nke ọrụ ọkụ dịka ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị ugbu a.
Ha na-arụkwa ọrụ dị ka ndị nlekọta ndị nwere ike inye aka ịhazi mbọ nyocha niile maka amụma ihu igwe. Mkpebi ndị igwe na-amụ gbasara ihu igwe a na-echebara iji melite njikwa na njigide nke oke ọkụ dabere na amụma ha nwere ike ime gbasara ikuku ifufe na ntụzịaka.
Kacha nkịtị bụ na nkịtị oké ifufe na-esonyere mmiri. Mana, ọ bụghị ihe a na-ahụkarị ịhụ ụdị ajọ ifufe a na mba anyị. A na-akpụkarị ya mgbe mmiri dị n'ígwé ojii adịchaghị oke ịmepụta mmiri maka ọnọdụ okpomọkụ dị oke elu ma gburugburu ya kpọrọ nkụ. Nke a bụ otú mmiri mmiri si asọpụta tupu ha eruo ụwa. Ha na-adịkarị ize ndụ, ebe ọ bụ na àmụmà nke na-ada site na oké ifufe nwere ike ibute ọkụ ọhịa mgbe ha ruru oke ọhịa ma ọ bụ na-ekpocha ahịhịa. Ebe ọ bụ na mmiri anaghị ezo ma ọ bụ na-ezo ntakịrị, ohere nke ọkụ ịgbasa dị elu.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ụdị ajọ ifufe ndị a chọrọ amụma amụma zuru oke ma ọ bụ na-erughị ka ha nwee ike izere ọtụtụ ọkụ ọkụ ọhịa na-eme n'akụkụ ebe ọnọdụ ndị a na-eme kwa mgbe.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ihe ifufe akọrọ na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Akọrọ oké ifufe